एक फरक कलेजमा स्थानान्तरण गर्न राम्रो कारणहरू
किन एक स्थानान्तरणले हामीलाई सान्त्वना दिन्छ?
कलेजको लगभग 30% बिभिन्न विद्यालयमा केहि बिन्दुमा स्थानान्तरित हुन्छ। प्रायः विद्यार्थीहरूले खराब कारणका लागि स्कूलहरू स्विच गर्छन् र पत्ता लगाउँछन् कि घाँस घाँटी पछि चिकन हुँदैन। यद्यपि, त्यहाँ धेरै परिस्थितिहरू छन् जुन नयाँ कलेजमा स्थानान्तरण सही निर्णय हो।
दुर्भाग्यवश, केहि विद्यार्थीहरू बस आफ्नो वर्तमान कलेजमा बस्न बर्दाश्त गर्न सक्दैनन्। यदि तपाईं पैसा दबाब महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, एक वित्तीय सहायता अफिस र तपाईंको विस्तारित परिवारसँग ट्राफिक निर्णय गर्नु अघि कुरा गर्न निश्चित हुनुहोस्। गुणस्तर स्नातक डिग्रीको लामो-अवधिको पुरस्कार अल्पकालिक आर्थिक असुविधा बढ्न सक्छ। साथै, महसुस गर्नुहोला कि कम महंगा विद्यालयमा स्थानान्तरण वास्तवमा तपाईं पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्न। स्थानान्तरणको लुकेका लागतहरूको बारे जान्नुहोस्।
फोटोवोइडोस्कक / गेट छविहरू
के तपाईं आफ्नो वर्तमान विद्यालयमा चुनौती भइरहेको छैन? के तपाईले यस्तो उच्च ग्रेड कमाएको छ जुन तपाईले सोच्नुहुन्छ कि तपाईं एकदम राम्रो विद्यालयमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ? यदि हां, एक स्थानान्तरण राम्रो विचार हुन सक्छ। एक अधिक प्रतिष्ठित कलेजले राम्रो शैक्षिक र क्यारियरको अवसर प्रस्ताव गर्न सक्छ। तथापि, तथापि, यो निम्न स्तरको विद्यालयमा कक्षाको तारा हुन सक्दछ यसको आफ्नै पुरस्कार।
मन्टे रकसेन / गेट छविहरू
यदि तपाइँ आफ्नो पहिलो वर्ष वा महाविद्यालयमा खोज्नु भएको छ भने तपाइँ समुद्री समुद्री जीवविज्ञानी हुन चाहानुहुन्छ, तपाईं सागर नजिकैको विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न चाहानुहुन्छ। त्यसै गरी, यदि कुनै पनि प्रोस्टिटिस्टको रूपमा क्यारियर छैन भने, तपाईंले देशको केहि विद्यालयहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ जुन यस्तो विशेष प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ।
कहिलेकाहिँ परिवारलाई विद्यालयमा प्राथमिकता दिनु पर्छ। यदि तपाईंलाई एक परिवारको सदस्यको रूपमा घरको नजिक हुनु आवश्यक छ भने, फरक विद्यालयमा स्थानान्तरण भावना बनाउन सक्छ। तपाईंको डेनलाई पहिला कुरा गर्नुहोस् - अनुपस्थिति को एक छोड कहिलेकाहीं एक राम्रो समाधान हो। साथै, सावधान रहनुहोस् सच्चै पारिवारिक आकस्मिक भ्रष्टाचारको लागी होमहोसीपन वा खाली-निष्ठा आमाबाबुको साथ जुन तपाईं घर नजिक पुग्न चाहानुहुन्छ।
विशाल / गेट छविहरू
कहिलेकाहीँ एक कलेजमा संस्कृति तपाईले चाहनुभएको कुराको विपरीत हो। सायद सात दिनको एक हप्ताको पार्टी दृश्य तपाईंको लागि होइन। सम्भवतः विपरीत सत्य हो - तपाई एक अधिक सक्रिय सामाजिक जीवन चाहनुहुन्छ, तर तपाईंको स्कूल धेरै गम्भीर देखिन्छ। यस्ता केहि अवस्थामा, एक स्थानान्तरण हुन सक्छ भावना। सबै पछि, कलेज मात्र शिक्षाविद्को बारेमा होइन। तर छिमेकी हुनुहोस् - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईलाई खोज्नु भएको सोशल समूह तपाईंको वर्तमान विद्यालयमा अवस्थित छैन। विद्यालय परिवर्तन गर्नु अघि साथीहरूको परिवर्तन प्रयास गर्नुहोस्।
केही खराब कारणहरू स्थानान्तरण गर्नुहोस्
त्यहाँ स्थानान्तरण गर्नको लागि थुप्रै राम्रा कारणहरू छन्, त्यहाँ केही पनि सम्भावना कारणहरू छन्। यी कुनै पनि कारणहरूको लागि स्थानान्तरण गर्नु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्:
प्रेम : ठीक छ, प्रेम खराब छैन, तर यो विद्यालयहरू परिवर्तन गर्न खराब कारण हुन सक्छ। आफैलाई सोध्नुहोस् यदि तपाईं नयाँ स्कूलमा खुसी हुनुभयो भने तपाईंको सम्बन्ध अन्त्य भयो भने? साथै, नबिर्सनुहोस् कि कलेजले सालको लगभग 30 हप्ता सम्म लिन्छ। ग्रीष्म, ब्रेक, र केहि सप्ताहांतको भ्रमणको साथ, एक बलियो सम्बन्ध दूरीमा बाँच्न सक्छ।
तपाईंको स्कूल धेरै कठिन छ: धेरै नयाँ कलेज विद्यार्थीहरू उनीहरूको कक्षाहरूसँग संघर्ष गर्छन्, र तपाईंले सम्भवतः पत्ता लगाउनुहुने कुनै पनि विद्यालयमा तपाईले पढ्ने र लेखन कार्य चुनौती पाउनेछ। कलेजमा अपेक्षाहरू हाई स्कूलमा भन्दा धेरै अधिक छन्, र जहाँ पनि तपाईं जानुहुन्छ क्यारोलस क्यालसिस हुन्छ। यदि तपाइँ कलेजमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं चुनौतीबाट भाग्न सक्नुहुन्न। सट्टामा, तपाईंको शैक्षणिक कुञ्जीहरू तपाईंलाई सहयोग पुर्याउनको लागि क्याम्पस सेवाहरू खोज्नुहोस्।
तपाईं होमइक हुनुहुन्छ: यो एक कठिन छ। अलगावको दुखाइ र अलगावको भावना बढ्दो हुन सक्छ। तथापि, तथ्याङ्क, कि कलेजको एक आवश्यक भाग जान्छ कसरी आफ्नै आफ्नै जीवन बिताउने। प्रायः सबै प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरूले घरभित्रै एकरूपमा वा अर्कोमा व्यवहार गर्दछन्। यदि तपाईंले पत्ता लगाउनुभएको छ कि तपाइँ यसको द्वारा पालना गरिएको छ भने तपाईले एक ट्राफिक अनुप्रयोग भर्ना गर्नु अघि तपाइँको कलेजको परामर्श केन्द्रमा जानुहोस्।
तपाईंले आफ्नो रूममेटलाई घृणा गर्नुभयो : कुनै पनि कलेजले नरकबाट कोठामै भन्दा भन्दा बढी दु: ख बनाउन सक्छ। तर एहसास गर्नुहोस् कि देशको हरेक आवासीय कलेजले विद्यार्थीहरूलाई लास कोठामा बनाएको छ। यदि तपाईंले आफ्नो रूममेटमा समस्याहरू काम गर्न कुनै सफलताको साथ प्रयास गर्नुभयो भने, परिवर्तनको बारेमा तपाईंको RA मा कुरा गर्नुहोस्। यदि स्विच सम्भव छैन भने, तपाइँ अर्को वर्ष फरक कोठामैट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर थाहा पाउनुहोस्।
तपाईं आफ्नो प्रोफेसरहरू मन पराउनुहुन्न : तपाईं सम्भव छैन कि कमजोर शिक्षकहरूसँग स्कूल भेट्टाउन सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कलेजमा केही व्यक्तिहरू छन् जुन क्लासरूममा कहिल्यै अनुमति नदिनु पर्छ। सौभाग्य देखि, तपाईं बुद्धिमानी कक्षाहरु को चयन गरेर यी ट्रेन को बर्गर देखि बच सकते हो। भविष्यमा तपाईंको कक्षाहरू चयन गर्नु अघि माथिल्लो-कक्षाका विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस् र संकाय मूल्याङ्कन निर्देशनहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस्। अर्कोतर्फ, यदि तपाईंको प्रमुख मा सबै संकाय कमजोर छ, त्यो एक स्थिति हो जुन एक स्थानान्तरण योग्य हुन सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको असन्तुष्टि साँच्चै नै हो किनभने तपाईंको शिक्षिका खराब छन्, किनकि तपाईं कक्षा पुरस्कृत गर्न आवश्यक प्रयासमा राख्न असफल भएका छन्।
आधुनिक अंग्रेजी (भाषा)
कुक इतिहास: कसरी र किन कुकुरहरू घरपरिवार थिए
कुवैत को भूगोल
रूसी इतिहास वास्तुकला मा
Réaliser - प्राप्त गर्न, पूर्ण; वास्तविक गर्न
रेनिन्मिबीको संक्षिप्त इतिहास (चिनियाँ युआन)
फ्लोरोसेंट लाइट्स संग समस्याहरु
एक्रिलिक पेंट समस्याहरु
कसरी PHP सँग पुन: निर्देशित गर्नुहोस्
मार्टिन लूथर किंग जूनियर पदोन्नति
यूएस सीनेटमा एक फिलिबस्टर के हो?
शीर्ष 10 एन्डरसन सिल्वा विजयहरु
Å la rigueur
'कृपया जाँच गर्नुहोस्:' ए वन-एक्ट योनाथन रन्डद्वारा खेल्छन्
Xenarthrans भेट्नुहोस् - Armadillos, Sloths, र Anteaters
शीर्ष मिनेसोटा कलेज र विश्वविद्यालयहरू
अमूल्य कलाकृतिहरू समयका टुक्राहरू हुन्
Wechsler टेस्ट को एक व्याख्या
मन्डारिन चीनियाँ क्रिसमस शब्दावली